Gadzira SearchStax SolrCloud index zvinyorwa neWPSOLR
musha » Rwendo rwako rwekugadzirira, nhanho nhanho » Gadzira zvinyorwa zvako » Gadzira indexStax SolrCloud index
591 maonero 1 February 12, 2019 January 14, 2020
Gadzira WPSOLR uye SearchStax Solr Cloud Manager
From WPSOLR 21.4.
Vhidhiyo iyi ngatiti unotova neaccount at TsvagaStax.
Iwe uchaona maitiro ekugadzira iyo SearchStax Solr Cloud Manager index nemashoma mashoma.
Chii chinonzi SearchStax?
SearchStax ibasa rekubata SolrCloud indexes, inotungamirirwa naSolr nyanzvi. Panzvimbo pekuisa SolrCloud pane ako maseva, iwe unowana kunyoreswa uye rega basa riitise mareferensi ako panzvimbo yako. Hapana kudiwa kwe manpower, kana maseva, zvekare.
Hechino vhidhiyo dzidziso:
1 - Signup ye free trial paKutsvagaStax Solr Cloud Manager
2 - Enda kune yako SearchStax dhibhodhi
3 - Dzvanya pane menyu "Cloud Manager"
4 - Dzvanya bhatani "Gadzira Kutumirwa -> Solr"
SearchStax: nyowani nyowani
5 - Gadza iwo matsva ekuendesa paramende
SearchStax: nyowani itsva yekuparadzira
Isa zita kune rako kuendesa
Sarudza Cloud Provider (apo node / VMs yako ichaiswa): Amazon Web Service, Microsoft Azur, Google Cloud
Sarudza dunhu (zvinoenderana neakasarudzwa Cloud Cloud
Sarudza mhando yekumisikidza: Yakatsaurirwa Node (imwe node), yakatsaurirwa Dzviti (akati wandei node)
Sarudza chirongwa (saizi yeyero imwe neimwe / VM)
Sarudza iyo Solr shanduro
Gadzira iyo deployment node
6 - Mirira kusvikira kutumirwa kwapera
SearchStax: kumirira kupiwa kwapera
7 - Dzvanya pane kutumirwa kuti uchinje marongero ayo
KutsvagaStax: gadziriso yekuiswa
8 - Kopa iyo yekupedzisira endpoint url
SearchStax: kopi kupepetwa endpoint url
9 - Gadzira mushandisi / password kuti uwane iyo sumbu
9.1 Sarudza chaiyo menyu
KutsvagaStax: menyu kuiswa kwechokwadi
9.2 Ita kuti kuve nechokwadi: (1) uye (2)
SearchStax: kutumirwa kunogoneswa
9.3 Wedzera mushandisi / password: (1) Dzvanya bhatani "Wedzera Mushandisi", (2) (3) seta mushandisi / password, (4) Sarudza chinzvimbo "Admin" kuti ugone kugadzira indekisi nyowani, (5) Dzvanya bhatani. "Wedzera"
SearchStax: kuendesa mushandisi mutsva
9.4 Nyowani mushandisi / password yakagadzirwa
SearchStax: mushandisi wekushambadzira wakagadzirwa
10 - Gadzira iyo SearchStax Solr index kubva kuWPSOLR admin
SearchStax: gadzira index itsva kubva kuWPSOLR admin
(1), (2), zvadaro (3) kugadzirisa indekisi itsva
(4) Sarudza "Apache SolrCloud" pakati pemhando dzedzidziso
(5) Sarudza "SearchStax" pakati peKubata maSevhisi
(6) Isa zita rako index, rinoonekwa muWPSOLR admin
(7) Seta zita renongedzo yako, rinoonekwa muKutsvagaStax Solr admin (chete mavara uye "_", hapana machena nzvimbo)
(8) Namatira iyo yekutsvagaStax kuisirwa endpoint url
(9) Seta mangani mashards ("zvidimbu") iyo indekisi ichagoverwa (1 kune imwechete node kuendeswa)
(10) Seta kangani shard imwe neimwe ichiteedzerwa (1 kune imwe node kuendeswa)
(11) Seta max shards pane imwechete / VM
(12) Namatira iyo yekutsvagaStax yekusimbisa mushandisi / password (kana ichitsanangurwa)
(13) Gadzira iyo indekisi
11 - Bvunza indekisi muKutsvagaStax Solr admin koni
11.1 Vhura iyo Solr admin koni
SearchStax: vhura iyo Solr admin koni
11.2 Ratidza data rako
SearchStax: inongedza iyo data muWPSOLR admin
11.3 Vhura iyo index screen
SearchStax: bvunza iyo indekisi muSol admin admin koni
(1) Sarudza indekisi yako
(2) Sarudza iyo menyu yemubvunzo
(3) Kuita bvunzo
(4) Mhedzisiro inoratidzwa